Iphinifa Ikhishi eyenziwe ngepulasitiki ne izandla zakho siqu. Iphinifa Ikhishi plastic: ukubuyekezwa kanye nezindleko
ingxenye ovundlile odongeni, esemgwaqweni phakathi amakhabethe ensikeni futhi worktop, ochwepheshe ngokuthi iphinifa. Le ndawo ikakhulukazi othambekele ahlukahlukene ekhishini ukungcola njengoba sise ipuleti worktop, lapho kwenziwa uhlinza nokupheka ukudla.
Ngakho-ke, ekhishini iphinifa akufanele kwenziwe nje enhle, kodwa futhi ezisebenzayo, hhayi singcoliswe kalula kakhulu, kuba efiselekayo ukuthi wageza kahle, futhi kwaba ukumelana lokushisa ukuhlanzwa ejenti. Lezi zimo zokuma ziyehluka iphinifa ukuze ekhishini eyenziwe ngepulasitiki.
Njengomthetho, it is enziwe PVC panel. Lokhu kwaziswa kahle aziwayo futhi ethandwa ezweni lakithi, njengoba nje iye lenqwaba izakhiwo ezinhle.
Ngaphambi kokuba uthenge iphinifa ukuze ekhishini noma ibha eyenziwe ngepulasitiki ekukhiqizeni yayo, kubalulekile ukuthola emihle nemibi lokhu enamathela, okungase kwenzeke phakathi ukusebenza.
Inzuzo enkulu yale okokusebenza wentengo okungabizi. He is labo abantu abadinga bazilungisele umshini ngokushesha nangemali ephansi. Ngaphezu kwalokho ukumelana kanye ubulukhuni enjalo iphinifa ekhishini has ezifanayo kodwa ngesikhathi esifanayo njengoba Tile. It is kahle bahlanza, amelana amakhemikhali, umswakama, amazinga okushisa aphakeme.
Lezi zingcwecwe zokumboza i odongeni itholakala ngezindlela ezihlukahlukene. Lokhu panel kungenzeka letingemasayizi lahlukene noma amashidi. Iphinifa Ikhishi eyenziwe ngepulasitiki (Abathengi uqinisekise leli qiniso) ibukeka akukho okubi kakhulu ukwedlula analogue materials ezibizayo. Lokho-ke ayinakho ezivuzayo, kungcono ukukhetha impahla ishidi. Kusukela kulo inqubo uzokwazi ukuba usike ubukhulu oyifunayo ipuleti.
Futhi kubalulekile, hhayi nje ngobe sobuhle bayo. Ngenxa ukungabikho amalunga wena lula wokuhlanza, ngaleyo ndlela saving time. Uzodinga emva ukupheka ekhishini Sula iphaneli ngendwangu emanzi. Amaphinifa eyenziwe ngepulasitiki ezibhekwa imvelo. Abakwazi ukukhokhela ngisho abantu bathambekele komzimba.
Iphinifa Ikhishi plastic ivumela ukuze lelisu imibono design. Lokhu kwaziswa Kulula ukusebenzisa noma isiphi umdwebo noma iphethini.
Namuhla e ukudayiswa aselungele ekhishini amaphinifa - plastic, wahlabeka kusayizi ojwayelekile, camera phezu iphethini. Abanye abakhiqizi wale mikhiqizo akuzona elinganiselwe. Bona ninikeza futhi spotlighting ukuthi iphinifa ukuze Plastic ekhishini wabheka into eyisimanga ngempela.
Ukusebenzisa esobala odongeni lokunameka zibukeke ithuthukisa isikhala, ikakhulukazi uma iphaneli is kuhlangene indawo ukukhanya. Izinzuzo iphinifa plastic:
nobungane kwemvelo futhi amandla okusezingeni eliphezulu;
ukumelana ukucindezeleka mechanical futhi umswakama;
ezingeni lelisetulu ukwahlukanisa ezishisayo kanye acoustic;
Ukudalwa ngokuphelele bushelelezi iphaneli ebusweni ngaphandle kokuvumela uthuli buthelela;
design ahlukahlukene, ikuvumela ukuthi ukhethe iphinifa nganoma yisiphi maphakathi nezwe;
asikho isidingo sokulungiselela ebusweni.
Ukuqedela lokhu lokususa encane abanye abathengi zihlanganisa imihuzuko evelayo phezu. Vele ufuna ukuphawula isitatimende - ke cishe kwenzeka uma usebenzisa ezivamile odongeni panel, futhi azihloselwe ngoba iphinifa.
Ezinye nolaka yokuhlanza ejenti kungasilimaza kakhulu ukuba iphinifa ukuze ekhishini eyenziwe ngepulasitiki ne imbangela ukusonteka.
Ungaqiniseka ku UKUQINA kuphela, uma ukhetha ukwenza polycarbonate, okungadingi zephuke kahle wageza, izinga lokushisa ukuncibilika ifinyelela degrees 120.
Ngithanda nilalele ukuthi, ngokuthenga plastic iphinifa, kubalulekile ukuba ngenkani isitifiketi, njengendlela material yekhwalithi ephansi phezu Ukushisa (kusukela isitofu noma kwelanga) izokhipha compounds eyingozi empilweni yomuntu. Certified, eliphezulu impahla akusho bungakhiphi noma yini elimazayo, ngisho noma ngephutha obolet ke ngamanzi abilayo.
Namuhla isendalini kukhona izinhlobo eziningana panel plastic. Ahluke degree of ukushisa ukumelana futhi ukumelana namanzi ezingeni. Ngakho kuqala kukho konke kufanele uqiniseke ukuthi uphiwa plastic, senzelwe lokhu ukusetshenziswa.
Ngaphezu izinkomba izinga, umehluko khona isinqumo design. inketho Original futhi engavamile ingavuthi iphaneli esobala eyenziwe ngepulasitiki ne ukukhanya. Uma ekhishini ngesitayela zakudala, ikhambi afanele kakhulu kuyoba amaphethini ezimhlophe ngaphandle iphethini.
Yini okufanele ibe nenkundla iphinifa plastic? Lo mbuzo iyathakazelisa eziningi. Ukuze anqume kubo, kufanele uqale kusukela uhlelo ekhishini futhi ngesikhathi esifanayo acabangele sici esisodwa esibalulekile - iphinifa ngendwangu kufanele kube kancane isikhathi eside kunaleso ibanga kusuka iKhabhinethi kwamanzi umsebenzi. Lokhu wekhasi kubalulekile ukuvikela odongeni kusuka amafutha nokungcola, futhi amasentimitha okudingekayo iphinifa kancane ngale onqenqemeni amathebula amakhabethe.
Ukuze uthole ivulekile ekhishini ngaphezulu material ofanele kanye nephethini esikhulu emnyama. Ngakho, wena kufanele ukhethe Indwangu okhanyayo nge touch of umhlobiso ekamelweni elincane. Ungakhohlwa ukuthi ephezulu isicwebezelisi evele zibukeke bandise isikhala.
Iphinifa Ikhishi eyenziwe ngepulasitiki ngezandla
Ukuze ekhishini iphinifa ubukeka umxhwele, kumele afakwe kahle.
Ngaphambi kokuba uqale, qinisekisa ukuthi ebusweni odongeni, okuzokwenziwa iphaneli fixed, bushelelezi ngokuphelele. Uma izinhlelo zakho ungafaki ukuqondanisa yayo, usebenzisa njengesisekelo indaba kuzodala ebusweni ngokuphelele flat. It zingenziwa ngokhuni slats noma ukuklanywa amaphrofayli.
Uma ucabanga ukuthi awukwazi kufezwe lo msebenzi, bese wena iphutha ngokujulile, - kuba ngamandla ngisho saqala.
Kukhona 2 izindlela of obandayo ekhishini iphinifa yilezi:
Ukufakwa nge ngezikulufo self-evunyelwe;
ukusetshenziswa ingcina ekhethekile.
Kuyaphawuleka ukuthi ukusetshenziswa inketho yokugcina lingaphansi elula ngoba esikhathini esizayo ngeke bakwazi ahlukanisa ke ukusebenzisa kwenye indawo, njengoba enamathiselwe plastic ingcina ngesikhathi ukususwa cishe aqhume. Njengoba ubona, ukwenza iphinifa ukuze ekhishini eyenziwe ngepulasitiki ngezandla zenu akunzima.
Le ndlela iyona engcono kunazo. Kulokhu, kungakhathaliseki ukuthi yini kuzolungiswa iphinifa - eya emthini iphrofayela noma ngqo ebusweni udonga. Ubuchwepheshe hhayi ekushintsheni.
Ezingosini kanye kanye emaphethelweni panel plastic kufanele bayamba imbobo encane nge ububanzi of mayelana 3-5 mm. Ngosizo iphinifa yabo futhi fixed nge ngezikulufo.
Cap iziqobosho kungonakalisa ukubukeka kwayo yonke indawo futhi avimbela ukuthi kungenzeki lokhu, udinga i-ukuthenga ofeleba plastic kanye Imigudu. Uma ufuna ukwenza okuthile okungavamile, sebenzisa nemicabango futhi udale izigqoko ungqo "sifihle" ngezandla.
Ngemva kokuqeda umsebenzi ukufakwa, kufanele aqinisekise imingcele. Uma ungaphenduki, ke ngokushesha endaweni ye webs uxhumano avele iminonjana ukungcola kanye isikhutha ungakheka ezindongeni edalulwa.
Ngaphezu kwalokho, umngcele linendima tebuciko - kudala sekugcineni ezimaphakathi ezingamathafa, ukuhlobana ebusweni odongeni iphinifa. Usayizi edingekayo nombala lokukhetha Kulula ngokwanele, ngaphezu kwalokho, ngokuvamile ihambisane iphinifa ngomumo.
Ikhishi iphinifa, plastic, izithombe ongawabona esihlokweni kufanele wenziwe izinga izincwadi ezihloselwe le njongo. Lapho ekukhetheni okubi noma ukusetshenziswa odongeni panel iphinifa uzoshesha ulahlekelwe isikhalazo futhi kungaba yingozi empilweni obathandayo ngisho. Ngakho, sincoma kakhulu ukuba uyithenga ezitolo kuphela futhi kuphela uma isitifiketi.
Plastic ishibhile kunabaningi kokuqeda izinto. Yingakho ungathenga ngemali ezingabizi kakhulu.
Nakuba kwakubiza iphansana, lihlangabezana nazo zonke izidingo zanamuhla. Kulula ukusebenzisa futhi ezingokoqobo. Ubukhulu PVC panel zidizayinelwe ukhululekile kakhulu usayizi ekhishini iphinifa. Ezimweni eziningi, ukuphakama yabo phakathi kuka-85 no-100 cm. Ngokwesibonelo, ubukhulu ephaneleni 960 x 485 mm ruble 150 kuya 200 apiece.
Izimo zethu zihluke kakhulu ngokwemvelo, intengo iphinifa plastic for ekhishini nesithombe ukuyiprinta kancane ephakeme, kodwa kuwufanele umzamo. Ngokwesibonelo, usayizi iphinifa 3000 x 600 x 1.5 mm kungadla ruble 1500.
Thenga ukuzi lezi zinto zingase zonke ezitolo ezinkulu DIY.
Iphinifa Ikhishi plastic: Izibuyekezo
Njengoba usuyitadishile Izibuyekezo zabantu ngubani vele amaphinifa eyenziwe ngepulasitiki, kumele kuphetfwe ukuthi lena indlela enhle kakhulu ekhishini design. Kuyinto isikhathi eside futhi kulula ukuhlanza, kuyilapho okungabizi.
Kungani udinga cindezela hlupha? Izici imishini yesimanje for ekhishini
Aluminium futhi Alloys yayo ukudla
Pancake pan: ukubuyekezwa, izincazelo, izinhlobo, abakhiqizi kanye nokubuyekeza
Izitolo Indawo ekhishini isakhiwo
Emincane kakhulu imethrikhi: usayizi kanye nencazelo. Emihle nemibi ohhavini abancane microwave
Umlobi yesayensi uWilliam Gibson: Biography, lokusungula
Lokhu kudingeka eshaweni ukunikeza evuthayo!
Ukuzixakekisa Debra: umdlalo nokuphila
Ibhizinisi Real nge 3D-amaphrinta
Uphi i-Field Maiden's? Umlando kanye namaqiniso athakazelisayo